एन्ड्रोइडका लागि VVIP Enjoyers Apk डाउनलोड गर्नुहोस् [MLBB Mod] - लुसो गेमर
एन्ड्रोइडका लागि VVIP Enjoyers Apk डाउनलोड [MLBB Mod]
नोभेम्बर 23, 2021 by जोन स्मिथ
यो नयाँ अद्भुत मोडेड गेमिङ एप VVIP Enjoyers भनिने एन्ड्रोइड गेमरहरूमाझ प्रचलनमा छ। साधारणतया, हामीले यहाँ प्रदान गर्ने गेमिङ एप मोबाइल लिजेन्ड्स ब्याङ्ग ब्याङ्गको मोडेड संस्करण हो। जहाँ सबै मुख्य ह्याकिंग सुविधाहरू आधारबाट विशुद्ध रूपमा परिमार्जन गरिएका छन्।
यद्यपि, अनलाइन संसार विभिन्न ह्याकिङ सुविधाहरूमा धनी छ। कुनै पनि एकीकरण वा इंजेक्शन बिना नि: शुल्क समान ह्याकहरू प्रस्ताव गर्ने दाबी गर्ने उपकरणहरू सहित। यद्यपि, त्यस्ता उपकरणहरू अन्वेषण र एकीकृत गर्नु जोखिमपूर्ण काम हो र यसले गम्भीर क्षति निम्त्याउन सक्छ।
अहिलेसम्म लाखौं गेमिङ खाताहरू लगायत उपकरणहरू स्थायी रूपमा प्रतिबन्धित छन्। र अझै, सुरक्षा प्रोटोकलहरू नियमित रूपमा अपग्रेड हुँदैछन्। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा, विकासकर्ताहरू अन्ततः यो अविश्वसनीय साथ फिर्ता आएका छन् मोड खेल.
VVIP Enjoyers Apk के हो
VVIP Enjoyers एप मूल MLBB को मोड संस्करण हो। जहाँ विकल्पहरू सहित विभिन्न ह्याकिङ सुविधाहरू एकीकृत छन्। रणभूमि भित्र गेमरहरूलाई सहयोग गर्न, यसले रणभूमि भित्र माथिल्लो हात प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, परिमार्जित गेमप्ले खेल्न र रमाइलो गर्न सुरक्षित छ।
यद्यपि अनलाइन इन्टरनेट संसार विभिन्न स्रोतहरूमा धनी छ। जहाँ परिमार्जित गेमिङ एपहरू सहित विभिन्न ह्याकिङ उपकरणहरू डाउनलोड गर्न पहुँचयोग्य छन्। तर धेरैजसो अनलाइन पहुँचयोग्य एपहरू पुराना र पुराना छन्।
यसको मतलब यस्तो Apk फाइलहरूको एकीकरण र प्रयोगले सजिलै फुटप्रिन्ट छोड्न सक्छ। ती सुरक्षा फायरवालहरू सहित उन्नत सर्भरहरू द्वारा सजिलै प्राप्त गरियो। मानौं यदि कुनै गेमर तेस्रो-पक्ष उपकरण प्रयोग गरेर सहयोग लिने पत्ता लगाइएको छ।
त्यसपछि सर्भरहरूले स्वचालित रूपमा IMEI र IP ठेगानाहरू सहित यन्त्रहरूको मुख्य प्रमाणहरू तल ल्याउनेछन्। यसबाहेक, यसले रणभूमि भित्र विभिन्न ह्याकिंग सुविधाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। यसैले तपाईलाई मुख्य सुविधाहरू मनपर्छ त्यसपछि यहाँबाट एपीके उपकरण डाउनलोड गर्नुहोस्।
नाम VVIP रमाइलोहरू
आकार 240.78 एमबी
प्याकेज नाम com.mobile.legend
आवश्यक एन्ड्रोइड ..4.1.। र प्लस
श्रेणी खेल - कार्य
मोडेड गेमप्ले अन्वेषण गर्दा, हामीले भित्र धेरै फरक ह्याकिङ सुविधाहरू भेट्टायौं। जसमा ESP Hack, Lock Hocker, Opponent Damage, Enemy Lag, Ping Rate Stabilizer, Rank Booster, Anti Ban र Anti Cheat आदि पर्छन्।
खेलाडीहरूले मन पराउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थप भनेको एन्टि-ब्यान र एन्टी-चीट सुविधा हो। अब विशेष दुई सुविधाहरू सक्षम गर्नाले एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूको मुख्य प्रमाणहरू लुकाउने छैन। तर यसले पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई पनि बेवास्ता गर्छ।
खेलाडीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै, एन्टि-ब्यान सुविधाले मुख्य नम्बरहरू लुकाउनेछ र नक्कलीहरू उत्पन्न गर्नेछ। नक्कली नम्बरहरूमा प्रत्यक्ष पहुँचको कारण, सर्भरहरूले उपकरण ट्र्याक गर्न सक्षम छैनन्। गेमिङ आइडी पनि गोप्य सेक्शन भित्र राखिएको छ।
जहाँ पत्ता लगाउने समस्याहरू स्थायी रूपमा समाधान हुन्छन्। एन्टी-चीट नामको साथ अर्को विकल्प पनि थपिएको छ। यो विकल्पलाई अनुमति दिँदा विपक्षी ह्याकहरू रोकिनेछ। र कुनै पनि नोक्सान नगरी आफ्नो ह्याकहरू सजिलै सञ्चालन गर्नुहोस्।
हामीले यहाँ प्रस्ताव गरिरहेको मोड गेमप्ले नवीनतम हो सम्झनुहोस्। जसको मतलब खेलाडीहरूले कुनै पनि obb फाइल अपलोड वा अपडेट गर्न आवश्यक पर्दैन। त्यसोभए तपाईलाई मुख्य ह्याकिंग सुविधाहरू मनपर्छ र युद्धको मैदान भित्र सबै समर्थक खेलाडीहरूलाई हराउन तयार हुनुहुन्छ। त्यसपछि VVIP Enjoyers डाउनलोड डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्।
मोडेड खेल डाउनलोड गर्न नि: शुल्क।
यसलाई स्मार्टफोन भित्र स्थापना गर्न सजिलो।
मोड गेम स्थापना गर्नाले खेलाडीहरूलाई युद्धक्षेत्र भित्र मद्दत गर्दछ।
धेरै ह्याकिङ सुविधाहरू थपिएका छन्।
जसमा ESP Hack, Hock Locker, Enemy Lag, Enemy Damage आदि सामेल छन्।
एन्टि-ब्यान र एन्टी चीट सुविधाहरू पनि पहुँचयोग्य छन्।
कुनै तेस्रो पक्ष विज्ञापनहरूलाई अनुमति छैन।
सदस्यता समस्या स्थायी रूपमा हटाइएको छ।
खेल इन्टरफेस सरल र मोबाइल-अनुकूल छ।
VVIP Enjoyers ML कसरी डाउनलोड गर्ने
त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरूले निःशुल्क समान फाइलहरू प्रस्तावको लागि दाबी गर्छन्। तर वास्तविकतामा ती वेबसाईटहरूले नक्कली र भ्रष्ट फाईलहरू प्रदान गर्दैछन्। त्यसोभए एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले त्यस्ता परिदृश्यमा के गर्नुपर्दछ जब सबैले गलत फाइलहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन्?
तसर्थ तपाईहरु भ्रममा हुनुहुन्छ र कसलाई विश्वास गर्ने थाहा छैन हाम्रो वेबसाइटमा जानु पर्छ। किनभने यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा हामी केवल प्रामाणिक र मौलिक एप फाइलहरू प्रस्ताव गर्दछौं। प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न हामी विभिन्न एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूमा Apk फाइल स्थापना गर्छौं।
याद गर्नुहोस्, इन्जेक्टरहरू सहित तेस्रो पक्ष उपकरणहरूबाट सहयोग लिनु गैरकानूनी छ। यसबाहेक, अहिले सम्म हजारौं यन्त्रहरू सहित गेमिङ खाताहरू स्थायी रूपमा प्रतिबन्धित छन्। त्यसैले हामी गेमरहरूलाई उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्दै मोडेड गेम स्थापना र मजा लिन सिफारिस गर्छौं।
यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा हामीले पहिले नै केहि उत्कृष्ट मोडेड MLBB संस्करणहरू प्रकाशित गरिसकेका छौं। जुन प्रकृतिमा परिचालन र प्रामाणिक छन्। ती मोडेड गेम एपहरू अन्वेषण गर्न कृपया निम्न लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। तिनीहरु KAORI ML APK र Nitchi Ez APK.
तपाईलाई सधैं साथीहरू र अन्य खेलाडीहरूसँग मोबाइल लिजेन्ड्स ब्याङ्ग ब्याङ्ग खेल्न मन पर्छ। यद्यपि, तपाई सधैं निराश हुनुहुनेछ जब तपाईलाई समर्थक खेलाडीहरूले हराउनुभयो। त्यसपछि यस सन्दर्भमा, हामी ती गेमरहरूलाई VVIP Enjoyers एन्ड्रोइडको परिमार्जित संस्करण स्थापना गर्न सिफारिस गर्दछौं।
विभाग कार्य, खेल ट्याग मोड खेल, VVIP रमाइलोहरू, VVIP Enjoyers Apk, VVIP Enjoyers एप, VVIP Enjoyers ML मेल अन्वेषण
एन्ड्रोइडका लागि डोडो आईपीटीभी एपीके डाउनलोड गर्नुहोस् [लाइभ टिभी]
एन्ड्रोइडका लागि अन्तिम काल्पनिक ब्याटल रोयाल एपीके डाउनलोड [खेल]